Yemmoo unkaalee garaagaraa gargaaramtu, Naannawwaan Unka ilaalcha duree unkaalee hundaaf laachuudhaan faankishinoota garaagaraa gulaali isaaniif ni mijeessa.
Kabala Unka Saxaxaa bani,
Too'annoowwan adda addaa Naanna'aa Unkaa keessaatti harkisuudhaanii fi haquudhaan akkamitti akkaa sirreessuun danda'amu jijjiiruu ni dandeessa. Too'annoolee tokko ykn tokkoo ol filuudhaan gara unka biraatti harkisi. Filmaataan too'annoo gara gabatee muraatti siiqsuuf AjajaCtrl+X ykn ajaja baafata halqara Haqi fi AjajaCtrl+V ykn too'annoo gara bakka biraatti saaguuf ajaja saagi gargaarami.
Gabatee muraa kessaan (furtuu qaxxaamuraa AjajaCtrl+C garagalchuu fi AjajaCtrl+V saaguuf) galmee keessaatti too'annoowwan garagalchuu dandeessa. To'atamtoota dhokatan Naanna'aa Unkaa keessatti garagalchuu kan dandeessu furtuun AjajaCtrl gadhiibamee osoo jiruu harkisii-kaa'ii fayyadamuudhaani.
Weyta unkaan filatame, qaaqa Tartiiba Cancala bana, where the indices for focusing the control elements on the Tab key are defined.
Wanta filame maqaa jijiiraa.
Title is: Unkaa Naanna'aa